people Nepal » विरामीको उपचार गर्दा भित्री अङ्ग देखाउँछिन् यी डाक्टर ! विरामीको उपचार गर्दा भित्री अङ्ग देखाउँछिन् यी डाक्टर ! – people Nepal
विरामीको उपचार गर्दा भित्री अङ्ग देखाउँछिन् यी डाक्टर !
आफुले विश्वका महान चिकित्सक फ्राइडको सिद्धान्त अनुरुप उपचार गरिरहेको उनको दाबी छ । यस थेरापी अनुसार पुरुषको यौन कुण्ठालाई बाहिर निकालिन्छ । यसबाट पुरुषले आफ्नो मनभित्र दबेका इच्छाहरु बाहिर निकाल्न सक्दछ । खासगरी पोर्नको कुलतमा फसेका पुरुष मनोरोगीहरुको उपचारमा उनको यो तरिका निकै प्रभावकारी हुने गरेको छ ।